Metatron tọhapụrụ cryptocurrency azụmahịa n'elu ikpo okwu
Metatron, a technology ọsụ ụzọ ọkachamara na accelerated ntọhapụ nke n'elu 2000 ngwa ọdịnala ụtọ ịkpọsa ntọhapụ nke BitMeet ™, a cryptocurrency azụmahịa n'elu ikpo okwu na price nsuso na ọrụ ọnọdụ dị ugbu a na Google Play.
Bitmeet ™ 's atụmatụ na-agụnye chat, ọnọdụ nke ndị ọrụ chọrọ ịzụta ma na ere cryptocurrency, ịnye ọnụahịa, ahịa okpu, ọhụrụ ozi ọma na ihe ndị ọzọ. Dị ugbu a na Google Play, anyị na-atụ anya na ọ na-wepụtara maka iOS ngwaọrụ n'ọdịnihu dị nso.
"Anyị cryptocurrency ikpo okwu Bitmeet ™ ga-enyere anapụta mmadụ n'agbụ nke centralized fiat ichekwa ego na bank, eke a ọgbọ ọhụrụ nke n'ji nso na ntoputa nke ezi isi obodo ahịa dabeere na a larịị ebre ubi,"Kwuru Metatron CEO Joe Riehl.
Direxion, ProShares, VanEck ịdọrọ Bitcoin ETF filings
Direxion, ProShares na VanEck so a njuaka ETF issuers na napụrụ filings ẹkedori bitcoin ETFs na arịrịọ nke U.S. regulators.
On a yiri leta, The sec na-achọ ọsọ ọsọ na chọrọ iwu mgbanwe site na Chicago Board Nhọrọ Exchange (CBOE) na ike ekwe mgbanwe depụta ruo anọ bitcoin ETFs. Cboe mbụ mgbanwe ọrụ na U.S. ịme futures dabeere na digital ego, ha emewo otú ikpeazụ nke ọnwa.
rue, dịghị mgbanwe ahịa ngwaahịa metụtara digital ego e mma site U.S. regulators.
Goldman Sachs: Na Ozizi Bitcoin nwere ike ịbụ a ziri ezi ọdịdị nke ego
Bitcoin nwere ike ịbụ a ziri ezi na ebe nile ụdị ego ma ukwuu n'ime nchepụta, maka ugbu a, dị ka Goldman Sachs strategists.
“The nile iji nke dollar n'èzí US - zuru dollarization ná mba ụfọdụ - na-atụ aro na e nwere na-ama na-achọ maka ihe mba nabatara agbanwere na ụlọ ahịa nke uru,” kwuru Goldman si Zach Pandl na Charles Himmelberg na a dee na Wednesday.
Na ndị mba na nkuku nke ego usoro ebe omenala ọrụ nke ego na-inadequately ọnọ, bitcoin (na cryptocurrencies ọzọ n'ozuzu) nwere ike na-enye viable uzo ozo.
Ọmụmaatụ, bitcoin mgbanwe mpịakọta surged na China mgbe mba malitere clamping ala na isi obodo outflows na 2016.
N'echiche, e nwere ihe ina bitcoin dị ka ụdị nke ego na-eme azụmahịa. Ma, dị ka akụkụ nke a ego Pọtụfoliyo, cryptocurrencies bụ “ọzọ agbanwe agbanwe na a classic ada afụ,” na strategists kwuru. Ha kwuru na Korea na Japan achịkwa bitcoin mgbanwe mpịakọta, ma na-mba na mụ ego usoro.
Nke bụ eziokwu bụ na cryptocurrencies ka nwere a elu usoro iwu mmanya ikpochapụ ọtụtụ ebe, na strategists kwuru. Na-amalite na, ọchịchị ike soro onye na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ na-anata digital ego.
Goldman Sachs na-kọrọ na-akwadebe a cryptocurrency trading oche.
Maduro si mmanụ kụziri cryptocurrency jụ Venezuela si nzuko omeiwu
Venezuela si na-emegide-ọsọ nzuko omeiwu na Tuesday outlawed a "Petro" cryptocurrency akwalite socialist President Nicolas Maduro, akpọ ya mgbalị iwu na-akwadoghị nnyefe ego-kere mba mmanụ mee.
Maduro on Friday kwuru ọchịchị ya ga-N'ỤLỌ NCHE fọrọ nke nta $6 ijeri Petros dị ka a ụzọ na-bulie ike ego na ize eze ego n'obodo amanye site Washington.
Cryptocurrency ọkachamara na-ekwu Venezuela si mismanagement nke ya na aku na uba, jikọtara na-achị achị Socialist Party nke akụkọ ihe mere eme enweghị nkwanye ùgwù maka onwe onwunwe ikike, ga-abụ na-ahapụ investors mmasị na-enweta Petros.
"Nke a abụghị a cryptocurrency, nke a bụ a na-atụ ire nke Venezuelan mmanụ,"Kwuru omeiwu Jorge Millan. "Ọ bụ ịkwa akwa mere maka nrụrụ aka."
Maduro ka routinely leghaara ome iwu kemgbe ya ọzọ efu achịkwa ya na 2016, na pro-ọchịchị Ụlọikpe Kasị Elu gbara ala fọrọ nke nta ka ọ bụla ụfọdụ agaala kemgbe ahụ.
Maduro na-enwe olileanya na ọ ga-eje ozi dị ka a na ugwo usoro maka mba ọzọ suppliers ma zere ịkwụ ụgwọ na-egbu oge na emewo ihe nnukwu kemgbe n'obodo wee banye ebe.
Fund Trat si Tom Lee: Bitcoin pụrụ n'ụzọ dị mfe okpukpu abụọ na 2018
Otu nke Wall Street nnukwu bitcoin oké ehi na-ekwu na cryptocurrency ike “mfe abụọ” ma ọ bụ ọbụna atọ na 2018.
“Ọbụna na a ize ndụ-gbanwee ndabere, M na-eche bitcoin na-aga na-adị mfe outperform na S&P,” Lee kwuru Tuesday na CNBC si “Futures Ugbu a.” “On a ogologo oge, kacha ụzọ lee bitcoin bụ dị ka a dochie anya ma ọ bụ a ahịa nke uru,” ọ si. “Ya mere dị ka Millennials achọpụta na n'ịwa ego, ha na-aga iji ya dị ka onye nnọchi maka gold.”
“Ọ bụrụ na bitcoin ọkọkpọhi 5 percent nke gold ahịa, na Olee ihe enyemaka $ 50,000,” o kwukwara. Nke ahụ bụ a karịa 200 percent kwapụ ebe bitcoin bụ ugbu a trading.
On a nso oge, Lee na-atụ anya bitcoin inwetaghachi ya December elu. “Anyị na-eche na site ufọt ufọt 2018, anyị na-aga na-akụkụ nke ụzọ e, na na ihe mere anyị na-enweta [bitcoin ka $20,000],” ọ si. “Ọ bụrụ na bitcoin pụrụ n'ezie ebili nso na $20,000 larịị ke akpa ọkara nke afọ a, M na-eche na nkera nke abụọ nke 2018, anyị ga-ahụ a aga ibu karịa na,” Lee kwuru. “N'ihi ya, m na-eche bitcoin bụ ka ihe ị kwesịrị ị na-efe niile afọ.”
The mpi ala ...
$20M Eta hacked fr ...
Previous Post:Ònye mere nnukwu onyinye kaadị ụlọ ọrụ? Top 7